Fikononana Nanerana Ny Faritra Atsimon’i Eoropa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Novambra 2012 1:33 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Português, Español, Ελληνικά, Français, русский, English
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitray manokana momba an'i Eoropa anaty krizy.
Ny 14 Novambra 2012 no andro nahitàna fitokonana voalohany amin'ny karazany toy izao, nahitàna ireo firenena Eoropeana Tatsimo rehetra izay tena iantraikàn'ny olan'ny fitsitsiana sy ara-bola. Ireo fikambanan'asa any Espaina sy Portiogaly dia nampilaza fitokonana faobe, raha ny tany Gresy sy Italia kosa ny fampiatoana asa nandritra io andro io no nomanina.
(Andro vitsy nialoha io, nifanehatra tamin'ireo hetsi-panoherana an-dalambe nanerana ny ilany atsimon'i Eoropa ny fitsidihan'ireo manampahefana sy mpitarika ambony Eoropeana).
Tao amin'ny Twitter, tenifototra maro no nampiasaina. Espaina, Portiogaly ary Gresy dia nampiasa ny #14N, ary Italia nànana ny #14Nit , Catalonia indray ny #14NBcn #14NCat. Ireo mpiteny Anglisy nampiasa ny #N14Riseup #europeanstrike #N14.
Nitranga nanerana an'i Eoropa ihany koa ny hetsika fanehoana firaisankina – nasehon'i European Trade Union Confederation an-tsary (Fiombonamben'ireo Sendikan'ny mpiasa Eorpeana). “Fahirano” natao ny Kaomisiona Eoropeana, nahavory olona novinavinaina ho 2.500 no namela an'i Bruxelles ho nafanafana ny faran'ny tolakandro.
Mpianatry ny Genoa nanao hetsika hanoherana ireo fepetram-pitsitsiana, 14 Novambra 2012. Sorabaventy mivaky hoe “Tsy ny fepetram-pitsisiana no atahorako, Atahorako ny fahanginana!”. Sary avy amin'i Donna Bozzi, Fizakà-manana Demotix.
Ireo sendika grika, izay vao avy namita indrindra ny fitokonana faobe nataony tsy ela akory izao, dia tsy namaly tamin'ny fomba ofisialy ilay antso hanao fitokonana faobe, na dia nisy aza ny fiantsoana fampiatoana asa ary nisy ihany hetsi-panoherana salantsalany natao tany Athenes sy Thessalonique, tetsy ankilan'ireo fitokonana sy fibodoana isan-tsehatra ary isam-paritra an'ilay fitsitsiana, izay efa ao anatin'ny taona fahatelo nisiany.
Barnaby Phillips, mpitatitry ny Al Jazeera amin'ny teny Anglisy nanambàra hoe:
@BarnabyPhillips: Somary mandreraka ihany ny rivotra iainana aty amin'ny hetsi-panoherana #14N aty Athenes, manaraka fombafomba. Saingy mahasalama ihany ny farany. #14ngr #Greece
Marobe ireo mpikirakira aterineto no mandefa bitsika an-tsary eo noho eo ilay famoriam-bahoaka. Niseho tamin'ny alàlan'ny sorabaventy, takelaka goavana ary saina lehibe nentina nitety ny afovoan-tananan'i Athenes ny fanehoam-piraisankina Eoropeana ho fanoherana ilay fepetram-pitsitsiana:
Portioge, Grika ary Espaniola tao Athenes, ny 14 Novambra 2012. Sary avy amin'i @thesspirit, naverina navoaka niaraka tamin'ny fanomezan-dàlany
Nisy zokiolona ihany koa nanatevina ilay hetsi-panoherana, nilahatra tamin'ireo tanora. Ny fanapatapahana matetika ny fisotroan-dronono dia nahatongaa ny maro amin'ireo mpandray izany hiaina any ambanin'ny fetran'ny fahantràna.
Hetsi-panoherana ny fepetram-pitsitsiana tao Athenes, ny 14 Novambra 2012. Mpandray fisotroan-dronono mitondra takelaka mivaky hoe “Andriamanitro o, atahorako ny hanoanana”. Sary avy amin'i @iptamenos33 tao amin'ny Twitpic, naverina navoaka miaraka amin'ny fanomezan-dàlany.
An'aliny ireo olona nidina an-dalambe tao Milan, Bologna, Turin, Padua, Genoa, Rome, Naples sy ireo tanàna hafa efa ho 100 nanerana ny firenena [it]. Rehefa nanatevin-daharana ilay Andro Eoropeana Hihetsehana [it] ho fanoherana ny fitsitsiana, teo ambanin'ny teny faneva toy ny hoe: “Mifoha i Eoropa androany — avy any Roma mandalo Madrid ka hatrany Athenes,” nitaky antoka misimisy kokoa amin'ny asany sy ho an'ireo misotro ronono ry zareo Italiana sady nitaraina noho ireo fepetra feno faneriterena napetraky ny Praiminisitra Mario Monti.
Mpanao hetsi-panoherana tao afovoan-tanànan'i Bologna. Sary avy amin'ilay mpampiasa Twitter, spyros gkelis.
Tanaty filaminana sy fahiza-mamorona tanteraka no nanaovan'ireo olom-pirenena avy amin'ny sokajim-piarahamonina samihafa ny hetsi-panoherana, na dia nisy ihany aza fifandonana vitsivitsy. Ny fitambarany dia polisy enina no naratra, izay tena voa mafy ilay iray tao Turin, miaraka amin'ireo olona enina voasambotra koa tany Brescia sy am-polony nosamborna tao Rome. Gabriele Drudi [it] dia nanambatambatra ny fizotrany feno miaraka aminà bitsika sy sary maro nandrakotra iny andro manontolon'ny hetsika iny.
Riccardo Laterza manoratra hoe:
@riccardolaterza: #14N #14nIT no fitokonana faobe Eoropeana voalohany indrindra: fandraisana anjara goavana, tsindry mavesatra. Endri-javatra efa hita taloha, saingy tsy hiala vehana isika!
Laura milaza hoe :
@scarylalla: Na ho amin'ny tsara, na ho amin'ny ratsy, nasehon'ny Eoropeana androany fa tsy ny vola tokana no mampitambatra antsika, fa ny hetahetantsika hisianà Eoropa iray hafa noho izao. #14N #14Nit
Fomba fijery mifanohitra amin'izay no aroson'ny hafa, isan'ireny i Salvatore Filippelli :
@salvo_82: Mino marina ve ianareo fa ireo “Eurocrats” mitondra an'i Eoropa dia hanova ny politikany ara-toekarena satria hoe nisy mpianatra vitsivitsy namaky fitaratra roa na telo? #14N #14nIT
Mbola mitohy ny fandalinana sy ny fifanakalozan-dresaka mikasika ny vokatr'ilay hetsi-panoherana ao aminà pejy Facebook iray, ary ao amin'ny YouTube dia noresahana nandritra ny resadresaka itambarambe iray fanao ny tolakandro tao amin'ny Anjerimanontolon'i Roma ireo zava-nitranga [it].
Vao nangiran-dratsy iny maraina iny, efa nisy sahady ny sakana napetraky ny polisy tanaty hamehana tamin'ny iray amin'ireo fidirana mankao Barcelona. Manaporofo ny fiantraikan'ilay fitokonana faobe tao Madrid ireo sary nivezivezy ahitàna ny fiaran-dàlamby babangoana sy ireo toby fandraisana fiaran-dalamby ambanin'ny tany.
Ireo mpanao hetsi-panoherana nivoy bisikilety kosa dia nametraka ny “bici piquetes” (tsatokam-bisikilety) tao Madrid sy Zaragoza, nalaza ny marainan'iny (#bicipiquetes) ary nifampizarana betsaka tety anaty media sosialy.
Lali Sandiumenge avy amin'ny Global Voices, izay nofafan'ny gazety La Vanguardia ny lahatsorany vao haingana momba ny fitokonana tao amin'ny orinasam-pifandraisan-davitra Telefonica, dia nitatitra avy eny amin'ireo arabe misy ny fitokonana. Nibitsika ny fahatsapan'ny olona maro omaly izy :
@lalisandi Ireo tombontsoa azo avy amin'ny fanaraham-baovao amin'ny aterineto: feno fomba fijery maro. Afaka ifampiresahana. Manana tombony fa azo jerena amin'ny fotoana iray any amin'ny toerana samihafa. Tsy misy teritery.
Ny “Iaioflautas” – ireo mpisotro ronono Katalana mpihoko (jereo ny mombamomba anay) dia tena hita teny tsara , nitanjozotra an-dalambe.
Hetsi-panoherana goavambe no nitranga nanerana an'i Espaina nanomboka tany Galicia hatrany Valencia, niaraka taminà famelezana sy fisamborana nataon'ny polisy an'ireo mpanao hetsika, toy ny tao Barcelona.
Ny herisetran'ny polisy no nameno ny tolakandro. Sarim-behivavy iray voalaza ho natosiky ny polisy tao amin'ny tohatry ny Metro ao Madrid no nifampizaràna be sy nanehoan-kevitra, hatramin'ireo sarinà bala fingotra nitifiran'ny polisy ny mpanao hetsika.
Saingy ny tena nivezivezy be indrindra dia ny sarin'ilay ankizilahy kely mpianatra (vao 13 taona) tao Tarragona nivoa-drà noho ny nataon'ny polisy, ary ny lahatsarin'ny polisy namely azy sy ireo vehivavy nanodidina azy.
Farany dia nisy ny adihevitra mikasika ny habetsahan'ireo mpanao fihetsiketsehana, ahitàna ny tombana zara raha misy nalefan'ny governemanta lasa zavatra mahatsikaiky aty anaty aterineto
@gobiernoespa: La Delegación del Gobierno habla de 35.000 personas en Madrid. Definitivamente hay una puerta a otra dimensión allí.pic.twitter.com/M5smSf3F
@gobiernoespa: Ny solontenan'ny governemanta milaza fa olona manodidina ny 35.000 ny tao Madrid. Dia tena misy varavarana mankany aminà tontolo iray hafa tokoa any izany.” pic.twitter.com/M5smSf3F
Tany ampiandohana dia somary nilamina tsara ny tao Portiogaly, nirohotra nanatevina ny fitokonana faobe ny rehetra. An'aliny ireo nidina nankeny amin'ireo arabe lehibe tao an-tanàna, nahitàna ireo mpiasa avy amin'ny fahitalavi-panjakana RPT izay efa nitokona tany ampiandohan'ity volana ity (jereo ny tatitray) [en]
Fifandonana iray ny alin'iny teo amin'ny polisy sy ireo mpanao fihetsiketsehana teo anoloan'ny Parlemanta Portioge ao Lisbon no namadika ilay hetsi-panoherana ampilaminana ho sehatry ny herisetra tsy hay nofehezina. Ilay mpampiasa Youtube, Beatriz Pedrosa, dia nandrakitra anaty lahatsary ireo vato natorak'andian-jatovo nisalobona anaty akanjo “hoodies” mainty sy nitafy T-shirt manohitra ny fanjakana mijoro.:
Avy eo dia niala avy any ny sakana sy ny famelezan'ny polisy izay nameno ny kianja tao anatin'ny roa minitra latsaka monja.
Ny bilaogy Activismo de Sofá dia nihetsika tamin'ny filazana hoe [pt]:
Rehefa tafahaona ny matihanina amin'ny tora-bato sy ny matihanina amin'ny vely kobay, dia ny ezaka nataon'ireo olona an'aliny marobe tamin'ity andro ity no manjary ametraham-panontaniana indray. Tsy hoe mitady fialàna tsiny noho ny nataon'ireo mpanakorontana vitsy an'isa akory, tena heveriko kosa fa tokony hitaky “bebe kokoa” amin'ireo mpanakorontana manao fanamiana ireo isika.
Ity lahatsoratra ity dia niarahan'i Asteris Masouras sy Bernardo Parrella nanoratra, miaraka amin'ny fanampiana votoaty avy amin'i Debora Baldelli, Ylenia Gostoli, Chris Moya ary Claire Ulrich.